Xarunta Warbaahinta CMD oo Dalka Holland ku Qabatay kulan Casho Sharaf ah + Sawirro – fogaanarag
Videos / Wararka / Wararka Holland | By Jama
Xarunta Warbaahinta CMD oo Dalka Holland ku Qabatay kulan Casho Sharaf ah + Sawirro
Xarunta Warbaahinta iyo Wadahadalka ee Center for Media iyo Dailogue ee fadhigeedu yahay dalka Netherlands, ayaa xalay casho-sharaf heer sare ah u sameysay safiirka Somalia u fadhiya wadamada Benilux Dr. Cali Saciid Faqi, Xildhibaan Cabdi Xoosh Jibriil iyo madaxii hore ee laanta afka Soomaaliga ee BBC-da Yuusuf Garaad Cumar.
Casho-sharaftan ayaa masuuliyiintan waxaaa kala qeyb galay oo iyagana goobta lagu marti-qaaday qaar ka mida madaxda ururada bulshada rayida ee ka dhisan dalka Holland iyo qeyb ka mida weriyayaasha ugu mudan ee Soomaaliyeed ee ka soo shaqeeyey dalka Sooomaaliya, waxaaan halkaasi ka dhacay kulan isugu jiray isbarasho furan iyo wada sheekeysi caadi ah.
Safiirka iyo xildhibaanka ayaa dalka Holland u yimid inay ka qeyb galaan barnamij dood ah oo ay wada qabanayaan xarunta CMD iyo Horn Media and Communications Ltd oo uu howl wadeen ka yahay Yuusuf Garaad Cumar, isla markaana qeybin doona doodan oo ah mid si weyn loo sugayo.
Barnamijkan dooda ah ayaa ku saabsan qorsha Hiigsiga 2016 iyo mowqifka dowlada ee ka aadan arrintaasi iyo sida looga mira-dhalin karo, iyadoo qurbo-joogta Soomaalida ee Holland ay dooda ka dhiiban doonaan fikradahooda.
2-dii bishii hore ee May 2015 ayaa dalka Holland lagu shaaciyey dhismaha xarunta CMD, iyadoo loo sameeyey xaflad ballaaran oo dad badan ay ka soo qeyb galeen.
Xarunta ayaa waxa aasaasay weriyayaal iyo dhalinyaro kale oo Soomaaliyeed oo degan dalka Holland, waxayna howsheeda ay tahay inay barnamijyo la xiriira warbaahinta iyo wadahadalada ku saabsan dib u heshiisiinta, nabada iyo dib u dhiska dalka Soomaaliya.